सुख्खा छालाका लागि FACE फेस प्याक तपाईंले यस गर्मी - PAMPEREDPEOPLENY.COM प्रयास गर्नु पर्छ - सुन्दरता
सुख्खा छालाका लागि Face फेस प्याक तपाईंले यस गर्मीमा प्रयास गर्नै पर्छ
घर सुन्दरता छाला हेरचाह छाला हेरचाह लेखक - सोम्या ओझा द्वारा सोम्या ओझा मे,, २०१। मा DRY छाला फेस प्याक | DIY | यदि तपाईं ड्राई छालाबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने यो मास्क लागू गर्नुहोस्। बोल्डस्की
गर्मी मौसममा सुख्खा छालाको ख्याल राख्नु कुनै सजिलो काम होइन। चर्को गर्मी र कठोर सूर्य किरणहरु तपाइँको शुष्क छालामा ओसिलो घाटा निम्त्याउन सक्छ र यसलाई डिहाइड्रेटेड महसुस गर्न छोड्छ। यसले थप अन्य कुरूप छाला समस्याहरू जस्तै फ्लाकिनेस, डलार्नेस, आदि निम्त्याउन सक्छ।
यसैले, यो तपाइँको छाला को हाइड्रेशन प्रदान गर्न आवश्यक छ र यसलाई यसको ओस कायम राख्न मद्दत गर्दछ। यो गर्नाले, तपाईं भद्दा समस्याहरू हटाउन सक्षम हुनुहुनेछ र तपाईंको छालालाई सबै गर्मी लामो उज्ज्वल र ताजा हेर्न मद्दत गर्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ यस गर्मी मौसममा कसरी आफ्नो सुख्खा छालालाई स्वस्थ राख्नको लागि सोचिरहनु भएको छ भने, त्यसो भए हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं। आजको रूपमा हामीले होममेड फेस प्याकहरूको एक सूची बनाएका छौं जुन तपाईंको छालाको बनावटलाई सुधार गर्न र यसलाई सँधै उत्कृष्ट देखिन मद्दत गर्दछ।
यी अनुहार प्याकहरू अवयवहरू द्वारा बनेका छन् जुन विभिन्न एक्स्फोलिएटिंग र छाला-सुखदायक गुणहरू समावेश गर्दछ जुन सुक्खी छालाको प्रकारमा आश्चर्य काम गर्दछ।
तपाईंको सुन्दर छालालाई तपाईंको सुन्दरता तालिकामा यी कुनै पनि घरेलु फेस प्याक समावेश गरेर राम्रो बनाउन मद्दत गर्नुहोस्। यहाँ एक नजर राख्नुहोस्:
१. दही फेस प्याक
दहीले तपाईंको छालाको हाइड्रेसन कारक बढावा दिन सक्छ र महले तपाईंको छालाको ओसलाई लक गर्न मद्दत गर्दछ। यो संयोजनले गर्मी मौसममा तपाईंको सुख्खा छालाको स्थितिमा आश्चर्य काम गर्दछ।
दहीको १ चम्मच
& frac12 हनी को चम्मच
२ पाक्ने स्ट्रबेरी
कसरी तयारी गर्ने:
- पाकेको स्ट्रबेरी म्यास गर्नुहोस् र अन्य सामग्रीहरूसँग मिक्स गर्नुहोस्।
- नतिजा प्याक तपाइँको अनुहार मा राख्नुहोस् र हल्का रूपमा केही मिनेट को लागी अर्को 10-15 मिनेट को लागी त्यहाँ छोडनु अघि मालिश गर्नुहोस्।
- गुनगुनाएको पानीको बाँकी भागलाई कुल्ला।
उत्तम परिणामका लागि हप्तामा कम्तिमा २- times पटक यो दही फेस प्याक प्रयोग गर्नुहोस्।
गर्भावस्थामा बच्चाको लागि खाना
२. काकडी फेस प्याक
काकडीले चिडिएको छालालाई शान्त पार्न सक्छ, जबकि दलिया र जैतुनको तेलले तपाईंको छालाबाट अशुद्धता हटाउन सक्छ र यसलाई अस्थिर हुनबाट रोक्न सक्छ।
१ चम्मच काकडीको जुस
दलियाको २- 2-3 चम्मच
जैतुन तेलको १/२ चम्मच
- सबै सामग्रीहरू भाँडामा हाल्नुहोस् र प्याक तयार हुनको लागि केही समयको लागि हलचल गर्नुहोस्।
- यसलाई तपाईंको अनुहारमा स्मर गर्नुहोस् र यसलाई १ 15 मिनेटको लागि त्यहाँ छोड्नुहोस्।
- यो गुनगुने पानीले धुनुहोस्।
हप्तामा दुई पटक, तपाईंको सुख्खा छालालाई दृश्यात्मक परिणामहरूको लागि यो अविश्वसनीय फेस प्याकको साथ व्यवहार गर्नुहोस्।
A. एलो भेरा फेस प्याक
एलोवेरा जेल र टमाटर सँगै मिलेर तपाईंको छालालाई म्याइस्राइज गर्न र यो चम्किलो रंग प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
१ ठूलो चम्चा एलो भेरा जेल
टमाटर पल्पको १ चम्मच
- कम्पोनेन्टको भाँडोमा राख्नुहोस् र प्याक तयार हुन मिक्स गर्नुहोस्।
- तपाइँको अनुहारमा लागू गर्नुहोस् र केही मिनेटको लागि त्यहाँ छोड्नुहोस्।
- यो गुनगुने पानी संग कुल्ला।
तपाईको सुख्खा छालालाई यस होममेड फेस प्याकको साथ हप्तामा कम्तिमा २- times चोटि प्रभावकारी परिणामहरूको लागि उपचार गर्नुहोस्।
Pap. पपीता फेस प्याक
पपीता र लैभेंडर आवश्यक तेलको उल्लेखनीय कम्बोले तपाईंको छाला ताजा बनाउन र यसलाई राम्रोसँग नमीमा राख्न र सबै गर्मी लामो चिकना रहन मद्दत गर्दछ।
एक पाकेको पपीता को दुई-दुई टुक्रा
& frac12 लैवेंडर आवश्यक तेल का चम्मच
- पपीताका टुक्राहरू म्यास गर्नुहोस् र लैभेंडर अत्यावश्यक तेलको तोकिएको मात्राको साथ मिक्स गर्नुहोस्।
- प्याक तपाईंको अनुहार मा राख्नुहोस् र यो त्यहाँ 15 मिनेट को लागी रहन दिनुहोस्।
- यसलाई हल्का क्लीन्जर र गुनगुनाउने पानीले धुनुहोस्।
यस पपाया फेस प्याक एक हप्तामा कम्तिमा २- times पटक प्रयोग गर्नुहोस् राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्नका लागि।
Sand. चप्पल फेस प्याक
चन्दनको पाउडर र गुलाब पानीको प्रयोग गरीएको परीक्षणले तपाईंको छालालाई सुख्खा हुनबाट बचाउँछ र गर्मी मौसममा यसलाई स्वच्छ रहन मद्दत गर्दछ।
र स्यान्डलवुड पाउडरको frac12 चम्मच
- अनुहार प्याक तयार गर्न कम्पोनेन्ट ब्लेन्ड गर्नुहोस्।
- बिस्तारै आफ्नो हल्का नम चेहरा छाला मा राख्नुहोस्।
- यसलाई टेपिड पानीले धोएर before-१० मिनेटसम्म सुकाउनुहोस्।
यो अविश्वसनीय प्याक हप्तामा दुई पटक इच्छित परिणामहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Alm. बदाम फेस प्याक
बदामको पाउडर र गुलाब पानीको शक्तिशाली संयोजनले तपाईंको छालामा हाइड्रेशन प्रदान गर्न सक्छ र यसलाई ओसिलो रहन मद्दत गर्दछ।
& frac12 बदाम पाउडर को चम्मच
१ भिटामिन ई क्याप्सुलहरू
- तेल बाहिर प्राप्त गर्न खोल्नुहोस् भिटामिन ई क्याप्सूल।
- सामग्री तयार हुनका लागि यसलाई अन्य कम्पोनेन्टहरूसँग मिलाउनुहोस्।
- तपाईको अनुहारमा हल्का मालिस गर्नुहोस् र यसलाई त्यहाँ १ and-२० मिनेटको लागि छोड्नुहोस्।
- टेपिड पानीले यसलाई कुल्ला।
सूर्य नमस्कार वजनको फाइदा
यस अद्भुत घरेलु फेस प्याकको साप्ताहिक अनुप्रयोगले तपाईंलाई एक राम्रो देखिने छाला प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
कसरी साडी टाँस्ने वरमहलक्ष्मी कलशमा
सही मन छुन छोटो प्रेम कथाहरु
दालको कचौरामा कति क्यालोरी
उज्यालो र सफा छालाको लागि घरेलु उपचार
सुख्खा खोकी र भिजेको चिसो फरक